स्थानीयद्धारा दिक्तेल–नेर्पा सडक मर्मत
११,माघ,खोटाङ । स्थानीय बासिन्दाको पहलमा खोटाङको दिक्तेल–नेर्पा सडक मर्मत गरिएको छ । सडकको पहिरो गएको र खोलाले बगाएको खण्ड स्थानीय बासिन्दाले मर्मत गरेका हुन् । झण्डै १० लाख खर्च हुने सडक २ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चमा मर्मत गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवान राईले बताए । वर्षा याममा समेत यातायातका गाडी चल्ने गरी सडककोबिचमा पर्ने छेपे खोला, भालु खोलाले बगाएको, खाल्डाखुल्डी भएको, भत्किएको र पुरिएको…विस्तृत समाचार »
मनपरी मूल्यमा एलपी ग्याँस बेच्ने डिलरलाई कारबाही गरिने
११ माघ, काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले अभावको मौका छोपेर खाना पकाउने एलपी ग्याँसलाई मनपरी मूल्यमा बेच्ने डिलरलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । बजारमा देखिएको एलपी ग्याँसको अभावका बेला ७ दशमलव १ किलोग्राम ग्याँसलाई ७ सय रुपैयाँ लिनुपर्नेमा मनलाग्दी मूल्य लिएर विक्री वितरण गरेको पाइएको भन्दै संघले यस्ता डिलर तथा व्यापारीलाई कारबाही कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ । संघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारीले उपभोक्तालाई…विस्तृत समाचार »
चारवटा जहाज खरिद गर्न निगमले माग्यो ३७ अर्ब रुपैयाँ
११ माघ काठमाडौ । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति चारवटा जहाज खरिद गर्न ३७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ र दुईवटा न्यरोबडीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । उनका अनुसार निगमले तयार पारेको तीनवर्षे सुधार कार्ययोजनाअनुसार जहाज खरिद पहिलो प्राथमिकतामा छ । निगमले तीन वर्षभित्रमा नै…विस्तृत समाचार »
स्पेनमा १२ मिनेटमा भूकम्पका तीनवटा धक्का
११,माघ,स्पेन । स्पेनमा लगातार भुकम्प जान थालेको छ । अमेरिकी भूगर्भ केन्द्रका अनुसार ६.२ म्याग्निच्यूट तीब्रताको भूकम्प गएको हो । स्पेनको मालागाबाट १ सय ६२ किलोमिटर दक्षिण पूर्वलाई केन्द बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन । भूकम्पबाट केही घरहरु चर्किएका छन् । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार १२ मिनेट भित्रै भूकम्पका तीन शक्तिशाली धक्का महसुस गरिएको छ । ६.२ को तीब्रता लगत्तै ५.० र…विस्तृत समाचार »
स्थानीयको दबाब थेग्न मुस्किल परेपछि वीरगन्ज नाका खुकुलो बन्दै
११, माघ काठमाडौं। स्थानीयको दवाव थेग्न मुस्किल परेपछि रक्सोल नाका खुकुलो हुँदै गएको छ। मधेसी मोर्चाको धर्नाका कारण ४ महिनादेखि जारी रहेको नाकाबन्दी हटाउन बढ्दो स्थानीयको दबाब थेग्न मुस्किल परेपछि नाकाबन्दी खुकुलो भएको हो। नाकामा अबरोध सुरु गरेपछि आयात निर्यात ठप्प भएको थियो। यातायातका साधन संचालन नभएपछि भरिया लगाएर पोकामा रक्सोल नाकाबाट वीगन्जतर्फ मालसामान ल्याउने क्रम करिब २ हप्ता अगाडिमात्र सुरु भएको थियो।…विस्तृत समाचार »
सर्वोच्चको आदेशपछि जलेश्वर कारागारका चौकीदार कैदमुक्त
११,माघ गौशाला । जलेश्वर कारागारका चौकीदार गणेशी मण्डल आइतबार साँझ कैदमुक्त भएका छन् । धनुषा जिल्लाको बिन्धी गाविस– ५ बस्ने ५० वर्षीय गणेशी मण्डल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६६ साल जेठ २४ गतेदेखि जलेश्वर कारगारमा रहँदै आएकामा दुई वर्षदेखि उनी सो जेलका चौकीदार भएका थिए । विसं २०७० देखि चौकीदार पदमा रहँदै कारागारको भित्री प्रशासन चलाउँदै आएका उनी आइतबार साँझ कैदमुक्त भएको जेलर शोभेन्द्र्र ठाकुरले बताए ।…विस्तृत समाचार »
जनकपुर आज चौ‌ंथो दिन पनि बन्द
११ , माघ जनकपुर रंगेली घटनाको बिरोधमा जनकपुर आज पनि बन्द रहेको छ । जनकपुर चार दिनदेखि लगातार बन्द छ । बन्दका कारण शिक्षण संस्था, बजार, व्यवसाय, यातायात लगायत ठप्प रहेका छन्। बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय समावेशी गठबन्धन लगायत जनकपुरमा आन्दोलनरत्त पक्षले मोरङको रंगेली घटनाको बिरुद्धमा आन्दोलन चर्काएका छन् । गएको बिहीबार मोरङको रंगेलीमा प्रहरीको गोली…विस्तृत समाचार »
बैतडीमा गाउं परिषद पछि धमाधम ईलाका स्तरिय गोष्ठी हुंदै
लक्ष्मी विजले,११,माघ,वैतडी । गाउं परिषद सम्पन्न पश्चात बैतडीमा धमाधम ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीहरु भैरहेका छन् । पौष मसान्त भित्र गाउँ परिषद गर्न दिएको समय भित्रै सबै गाविसको परिषद सम्पन्न गरिसकेपछि आइतबार देखी ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठी शुरु भएका हुन् । १३ वटा ईलाका रहेको वैतडीमा आईतबार पहिलोदिन विभिन्न ७ वटा ईलाकाहरुमा परिषद सम्पन्न भएका हुन् । ईलाका नं. १ को सलेना गाविस, ईलाका नं.…विस्तृत समाचार »
पाँच वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने ६० वर्षीय बृद्ध पक्राउ
११,माघ ,दाङ । पाँच वर्षीया बालिकालाई केहीदिन अगाडि बलात्कार गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष रोकाले दिएको जानकारीअनुसार पक्राउ पर्नेमा फूलबारी गाविस–५ बगरपुरका ६० वर्षीय खुमबहादुर बुढाथोकी रहेका छन् । वगकतषथसूश्रबालिकालाई ललाइफकाई ढकनास्थित सामुदायिक नर्सरीमा लगी जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएसँगै निजलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रोकाले बताए । पक्राउ…विस्तृत समाचार »
पचासी वर्षमा लगनगाठो !
११,माघ संखुवासभा । उमेरले ८५ वर्ष पुगेका खाँदबारी १ का जीतबहादुर राईले भर्खरै विवाह गरे । आफन्त कुलकुटुम्ब र गाउँलेलाई निम्ता दिएर बेहुला भएर उनले सभापोखरी ३ की मालती लिम्बूलाई घर भित्राए । पहिलो श्रीमतीको मृत्यु भएपछि उनले दोस्रो श्रीमतीको रुपमा मालतीलाई स्वीकार गरेको बताए । अविवाहित बसेकी ५० वर्षीया मालतीले गाउँले र आफन्तले विवाह गर्न दबाब दिएपछि आफूले विवाह गरेको बताइन् । आइतबार विवाह…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 1809 1810 1811 1812 1813 Older Last ›